Fahalalahana maneho hevitra : mampitandrina ny filoha | NewsMada
Fahalalahana maneho hevitra : mampitandrina ny filoha
“Ekentsika ny fahalalahana, fa misy fetrany ny fahalalahana na iza na iza izy. Aoka izay ny fampiadiana, ny fanosoram-potaka. Tokony ho ao anatin’ny fanarahan-dalàna no andehanana amin’izany fahalalahana izany.”
Kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina tany Alakamisy-Itenina, Vohibato, faritra Matsiatra Ambony, ny faran’ny herinandro teo, io. Tsy lalodalovana izy, tsy mody tsy mahita sy tsy mahafantatra izay iainan’ny vahoaka sy ny fahasahiranany.
“Feno ny fepetra hampandrosoantsika ny firenena: raiso ny andraikitra”, hoy izy. Rehefa manontany ny zava-bitan’izay nitondra teo aloha, aleo hifandahatra eo ambony latabatra fa sahy hifampitaha amin’izany izy.
Mila faharetana ny fametrahana fotodrafitrasa fototra. Aza mety atositosiky ny olona handeha haingana ny tena. “Hampianjera anao izy amin’izay, handray ny toeranao”, hoy ihany izy. Aoka izay ny fampidinana ny firenena, latsaka ambany loatra ao anatin’ny hantsan’ny fahantrana tao anatin’izay 55 taona izay.
Rehefa ao anaty ny fitiavan-tanindrazana: hay ny mamaly ny mpanakorontana sy ny mpihantsy ady.
Tsy arakaraka izay lazaina hatrany ny zava-misy sy iainana
Iza no tsy manara-dalàna mampiditra am-ponja sy mampihorohoro izay mitady hihetsika rehetra? Na amin’ny fitrandrahan’ny vahiny harena an-kibon’ny tany sy an-dranomasina tsy mazava… Efa resabe ny tsy fanarahana lalàna fototra na ny lalàmpanorenana momba ny fanolorana Praiminisitra, ny fivadihan’ny depiote loko…
Feno ny fepetra amin’ny fampandrosoana. Nefa ny delestazy hoe ho voavaha ao anatin’ny telo volana aza: telo taona, tsy vita. Eo ny harem-pirenena itavanan’ny vahiny, ny tsy fandriampahalemana, ny fitsaram-bahoaka, ny fidangan’ny vidim-piainana… Sao ny kapoaka no feno?
Vitan’ny fifandaharana ambony latabatra ve ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka? Tsy izao fitondrana izao ve no tena mampidina ny firenena sy ny vahoaka amin’ny hantsan’ny fahantrana lalina noho ny teo aloha? Tsy efa nilaza ve, ohatra, ny Justice et Paix eo anivon’ny Fivondronamben’ny eveka fa bemarenina tsy mandre ny fitarainan’ny vahoaka izao fitondrana izao?
Resaka tian-kateza fa tsy hita intsony izay hampandriana adrisa?